Fumana uphononongo oluphambili lwe-noopept kwi-intanethi ukusuka kwi-wisepowder
Noopept sisongezo esinamandla se-nootropic esisiphumo sosapho lweziyobisi i-racetam. Uninzi lwabantu luthatha ichiza leNoopept nootropic njengenye yezona ziphuculo ziqondayo. Ngaphandle koko, kukuhamba-ukongezelela abantu abafuna izongezo ezineepropathi zedropopu. Nangona ine-dipeptide isakhiwo, ngokufana nePiracetam, amandla eNoopept ahlukile kule IPiracetam.
Kolu hlaziyo lweNoopept, siza kubona imvelaphi ye-Noopept, i-Noopept nootropic stack, Iziphumo ebezingalindelekanga zeNoopept, ukuthelekiswa kwePiracetam, idosi yeNoopept kunye nezibonelelo zeNoopept kunye nendawo efanelekileyo yokuthenga i-Noopept (GVS-111).
I-Noopept 157115-85-0 yenziwa okokuqala ngqa ngo-1996 kwaye ukusukela ngoko, ibe iluncedo olukhulu ebantwini. Imiselwe ikakhulu njengonyango lokuphazamiseka kwengqondo okwahlukileyo njengokulimala kwengqondo ebuhlungu, ukonakala kwengqondo ngenxa yobudala kunye nokungafikeleli kwentliziyo. Isongezelelo sihlala singalawulwa kumazwe amaninzi nakwimimandla, kwaye, ngoku, ifikeleleka ngokulula, ngakumbi kwimarike ye-Intanethi.
Nangona okwangoku akukho sifundo sibhaliweyo malunga nokuphucula ukwazi ukuqonda I-Noopept (GVS-111) ipowder emntwini osempilweni, iingxelo ze-anecdotal ezivela kubasebenzisi be-Noopept nootropic zibonisa iziphumo ezihle ze-nootropic zesongezelelo.
I-Noopept kunye neNootropic
Njengamanye amachiza e-nootropic, iNoopept powder iyeza elilumkileyo elinokuthi ukuba lithathwe ngumntu osempilweni, linokuphucula ukusebenza kwengqondo. Nangona kunjalo, ngokungafani ne-nootropics yendalo, iNoopept iyinto yokuxhasa eyenziweyo kwaye iziphumo zayo zivakala ngokukhawuleza xa kuthelekiswa ne- i-nootropics yendalo.
Iziphumo zeNoopept ziqhelekile ngaphakathi kwimizuzu embalwa emva kokuyithatha ngelixa ezinye i-nootropics (ngakumbi ezo zendalo) zinokuthatha iiyure okanye iintsuku.
Isebenza njani i-Noopept?
I-metabolism ye-Noopept nootropico yenzeka kwisibindi emva koko, inkqubo yokugaya ukutya ifumana ngokukhawuleza ichiza. Emva koko isongezelelo sisasazeka ngokukhawuleza, ukufikelela kuwo wonke umsinga wegazi kunye nengqondo.
Akukacaci ncam ukuba isebenza njani i-Noopept. Nangona kunjalo, kubonakala ngathi yimiphumo yomboniso weNeoopept psychonaut xa isongezelelo sisebenza kwingqondo ngeendlela ezahlukeneyo. Okokuqala, kukholelwa ukuba uNoopept unyusa impendulo ye-acetylcholine ngokunika isiphumo esibonakalayo kwiinkqubo ze-neurotransmitter.
Kuba i-acetylcholine inefuthe elibonakalayo kumakhono okufunda kunye nokwazi komntu, uNoopept, ke, uNoopept unceda ukuphucula amanqanaba amabini.
Kwakhona, uphando lubonisa ukuba iNoopept nootropic inyusa ukubonakaliswa kwesizathu sokukhula kweNort (NGF) kunye nesifo esivela ebuchotsheni (BDNF). Iiproteni ze-neurotrophin ezimbini (i-NGF kunye ne-BDNF) zibaluleke kakhulu kungekuphela nje kwimemori yempilo kodwa nakwinkolelo. Balawula amanqanaba obuchopho be-neurotransmitter glutamate yobuchopho.
Ngokumodareyitha umsebenzi wazo zombini ii-receptors, uNoopept unceda ekuthinteleni ubuthi be glutamate, enokonakalisa i-neurons. Isongezo sikwanceda nasekuphelisweni kwe-calcium eyongezelelweyo kwaye siphucule ukuhamba kwegazi.
Ngaphandle koko, ngokusebenzisa amanqanaba e-calcium kunye ne-glutamate, i-nootropic ikwaphucula i-neuroplasticity enceda kakhulu kwimemori yexesha elide. Iziphumo ze-nootropic kwakhona zikhokelela ekuphuculeni ukuhamba kwegazi ngokunyusa impilo yengqondo kunye nokuphucula ukwakheka kwegazi.
INoopept vs Piracetam: Ngaba ziyafana?
Xa uthelekisa i-Noopept vs Piracetam, kukho izinto ezifanayo kunye nolwahluko phakathi kwezi zimbini. Iziphumo zeNoopept ziyafana neePiracetam's kwaye bobabini babelana ngokufana malunga neendlela zabo.
Zombini i-nootropics zibonelela ngendlela evuselelayo kunye noncedo ekunciphiseni koxinzelelo kwaye zinikeze i-neuroprotection ephawuleyo. Ngaphandle koko, zisetyenziselwa ukuphucula ukuqonda kwabantu. Ngenxa yoko zisetyenziselwa ukufunda kwaye Ukuphuculwa kwememori. Kwakhona, omabini la machiza anyibilika emanzini
Nangona kunjalo, ubume bemichiza yePiracetam yahlukile kule kaNoopept kuba yona ayisiyiyo ngqo Umdyarho, ngokungafani nePiracetam. Kananjalo, umahluko omkhulu ukuza kuthi ga ngoku kwiNoopept vs Piracetam ichaphazelekayo ngokwamandla abo kunye nesantya sokusebenza.
I-Noopept imalunga namaxesha ayi-1,000 XNUMX omelele xa kuthelekiswa nePiracetam kwaye kunjalo, ukumelwa kwayo ngumzimba ngokukhawuleza. Yiyo loo nto a Umthengisi kaNoopept Uya kukuxelela ukuba iyeza li-1000-amaxesha esebenzayo ngakumbi kunePiracetam. Ngelixa umthamo oqhelekileyo weNoopept ukusuka kwi-10 mg ukuya kuma-30 mg ngemini yePiracetam yi-3000 mg ukuya kwi-4000 mg.
Yiyo loo nto uninzi lweNoopept reddit luphawula ukuba uninzi lwabasebenzisi luyezwa umphumo weNoopept ngaphakathi kweyure okanye imizuzu embalwa yokuthatha isongezelelo ngelixa abo bathatha iPiracetam kufuneka balinde iiyure ngaphambi kokuba bafumane iimpembelelo zePiracetam.
Ngaphaya koko, uNoopept iziphumo zeNoopept zihlala ixesha elide kunalezo zePiracetam. Omnye umahluko kukuba i-psychop ephikisayo yokunyusa amandla kwiNoopept zincinci kunezo zibangelwa yiPiracetam.
Omnye umehluko: ngokungafani nePiracetam ekhuthaza kuphela inkqubo yememori 'amanqanaba okuqala, umthamo we-Noopept powder unefuthe kumanyathelo abandakanya ukudityaniswa kunye nokubuyisa inkumbulo. Ke ngoko, ngokungafani nePiracetam enceda umntu ukuba akhulise inkumbulo, uNoopept uhamba imayile eyongezelelweyo ukukunceda ukuba uphinde ufumane imemori kwaye ukhumbule ulwazi olugcinwe kwimemori yakho.
Kwakhona, uNoopept unesibonelelo esongezelelweyo sesenzo sokulwa nexhala, esilela ePiracetam. Amandla kaNooptet wokukhululeka koxinzelelo abangelwa kuko antioxidant Isiphumo, ukubanakho ukubhaqa okunokuba yityhefu yikholeji eninzi kunye nokuhlutha ngenxa yoko ezichasayo inyathelo
Ngaba uNoopept usetyenziselwa ntoni?
Ulwazi olunikezwe ngumenzi kunye nokuhlolwa kwakhona kweNoopept reddit, i-Noopept isetyenziselwa iinjongo ezahlukeneyo. Izibonelelo eziphambili zeNoopept zibandakanya:
Unyango lokulimala kwengqondo
Iziphumo kwimemori zixhaswa luphando olwenziwe kwiimodeli apho kuncitshiswe khona amandla okuqonda okanye ingqondo eyonakalisiweyo. Kuzo zonke iimeko ezinjalo, uninzi lwazo sele ziqhutywa eRussia, kuye kwaqinisekiswa ukuba iNoopept iqinisa imemori impilo.
Ngokukodwa, isongezelelo kufunyenwe ukuba lunyango olusebenzayo lokuphazamiseka kwengqondo okwahlukileyo okufana ne-neurodegeneration ngenxa yokuguga, ukonakala kwengqondo ngenxa yokusetyenziswa kotywala, ukubetha kunye nesifo ingqondo.
Kwizifundo ezahlukeneyo ezenziweyo kwizilwanyana ukuseka iziphumo zeNoopept, ngakumbi amandla eyeza lokuphucula ukuqonda, abaphandi baqaphela ukuba ukongezo kwakhuthaza i-NGF kunye ne-BDNF. Zombini iikhemikhali zidlala indima ebalulekileyo kumandla okwazi komntu.
Ngomgangatho we-NGF ofanelekileyo, umzimba uyakwazi ukuvelisa iiseli ezintsha ze-nerve kwinkqubo eyaziwa ngokuba yi-neurogeneis. Xa umzimba uvelisa iiseli ze-nerve ezaneleyo, iinethiwekhi zengqondo ze-neural zisebenza ngcono kuzo zonke iindawo ezinxulunyaniswa nengqondo.
Ngokuchasene noko, xa inqanaba le-NGF liphantsi, mhlawumbi ngenxa yokuphazamiseka kwengqondo, isifo sengqondo esixhalabisayo, isifo seTett, isifo sengqondo kunye nesifo i-Alzheimer's, phakathi kokunye ukuphazamiseka kwengqondo okunxulumene nengqondo, umzimba awukwazi ukufikelela kwinqanaba elisempilweni le-neurogene. Ngenxa yoko, ukusebenza kweenethiwekhi ze-neural ngaphakathi kwengqondo ziya ziwohloka.
I-Noopept inokuba luncedo olukhulu kubantu abanempilo enkenenkene ngenxa yenqanaba eliphantsi le-NGF ngenxa yeeseli zemithambo ephantsi. Amachiza anyusa inqanaba le-NGF, elenza ukuba umzimba uvelise iiseli ezininzi. Ngaphandle koko, i-Noopept 157115-85-0 ikhokelela kwizinga eliphezulu lokusinda kunye nexesha leeseli ze-nerve ezibandakanya iiseli zengqondo.
Isiyobisi sisebenza kwisigaba ngasinye sokusebenza kwememori, ngokunyusa i-BDNF, ukuphucula imemori yakho. I-BDNF, njenge-NGF, inefuthe kwiseli yeeseli zemithambo-luvo, kodwa oku kujongana neeseli zemithambozo ezifumaneka kwiindawo zobuchopho ezinxulumene ngokusondeleyo nokufunda, ukucinga okuphezulu kunye nememori.
Ngokuchukunyiswa kwe-BDNF njengesiphumo seNoopept, umntu uphuhlisa inkumbulo yexesha elifutshane kunye nexesha elide. Ke, ukuba unexhala malunga nenkumbulo yakho enkenenkene, uNoopept angakunceda kakhulu.
Abantu abazabalaza ukugcina ukugxila banokufumana kwakhona ixesha elikhulu ukusuka kwiNoopept ephezulu Neuroprotective iipropathi eziluncedo kwimpilo yengqondo. Izakhiwo zikhuthaza ukusebenza kwengqondo yakho ngendlela enokuthi ikugqalisele ngcono ixesha elide.
Ukuphucula amandla okufunda
I-Noopept inokukhulisa amandla akho okufunda. Xa ichiza linika amandla i-neurotransmitter kwingqondo, inegalelo kuphuculo lonxibelelwano lwenethiwekhi ye-neural. I-NGF esebenzayo ngakumbi kunye ne-BDNF ngenxa yeziphumo zeNoopept zikhokelela kwizinga eliphezulu lokusinda kwi-neurons esele ikhona kunye nokukhula okuhambelana kunye nokukhula kwe-neuron.
Iziphumo zichaphazeleka kakhulu kwi-hippocampus kunye nakwi-cortex yecereal. Iindawo ezimbini zobuchopho ubukhulu becala ziphembelela amandla akho okucinga kunye nokufunda. Ngenxa yoko, ufumana ukhathalelo lwengqondo lokukhathala kwaye bayakwazi ukucubungula ulwazi kwaye bafunde ngokukhawuleza.
Ukunyusa umoya kunye nokukhululeka koxinzelelo
UNoopept unako Unciphise ixhala emntwini. Izifundo eziqhutywa kwizilwanyana ukufumanisa amandla e-Noopept ukunciphisa uxinzelelo, abaphandi baqaphela ukuba izilwanyana eziye zanyangwa ngechiza zanezinqanaba eliphantsi loxinzelelo lokuba umlingane wabo ongakhange alufumane unyango.
Kolunye uphando olwenziwe kubantu abanengxaki yokuphazamiseka kwengqondo ethambileyo, ithamo ye-Noopept yamaxesha e-10mg ngosuku ikhokelela ekunciphiseni koxinzelelo. Nangona kunjalo kuhlolo lwe-Noopept reddit, abanye abasebenzisi besixhasi bayongeza ukuxhalaba emva kokuthatha isongezelelo ngelixa abanye besithi bafumana uxinzelelo ngakumbi.
Kulabo baziva bexhalabile emva kokusebenzisa i-noopept, kukrokreleka ukuba iyeza livuselela iindawo zobuchopho apho zifunyanwa khona ii-dopamine kunye ne-nicotinic receptors, ngenxa yoko kukhokelela ekunciphiseni koxinzelelo. Ngaphandle koko, kubantu abaninzi, i-supplement ivuselela i-receptors ezithile ze-serotonin. Ii-receptors zinoxanduva lolawulo lweemvakalelo. Ke ngoko, ukuba zivuselelekile, zikwenza uzive wonwabile.
Ukuphuculwa kokuqonda kwemvakalelo
Ukuphuculwa kokubona okubonakalayo kuphakathi kwezibonelelo zeNoopept. Ngaphandle kokuphucula impilo yengqondo kunye nokukwazi ukuqonda, abanye abantu abathatha i-Noopept nootropic baxela ukuphucuka kwengqondo yokuqonda ngenxa yeso siyobisi. Umzekelo, bafumana umbono ongcono kunye nokukwazi ukuva emva kokusebenzisa isongezelelo.
Kungenxa yesi siphumo ukuba abasebenzisi abaninzi beNoopept baxela ukuba bawuxabisa ngakumbi umculo emva kokusetyenziswa kwesiyobisi. Batsho ukuba bafumana umculo uvakaliswa ugcuma kwaye ubanzi ngakumbi ngenxa yokusebenzisa.
Ndingamthatha njani uNoopept?
Ngoku, iza Noopept powder ulithatha njani iyeza. Ewe, umthamo oqhelekileyo weNoopept powder zii-milligram ezi-10. Iyeza elikuloo mali kuthiwa lithathwa izihlandlo ezibini yonke imihla kwaye kufuneka laphambi kokutya. Le yeyona ndlela incomekayo yesiqalo.
Nangona kunjalo, ukuba kufuneka, i-dosi ye-Noopept inokutshintshwa phezulu ukuya malunga ne-30mg ngemini; malunga ne-15mg idosi ezimbini ngosuku. Nangona kunjalo, abanye abantu abasebenzisa ingxelo yeziyobisi ukuba umthamo ophakamileyo we-Noopept powder unciphisa iziphumo zokuqonda ezilindelekileyo kubo.
Ngokwesiqhelo, ukusetyenziswa kweNoopept kumiselwe ixesha lokuphela kwenyanga enesiqingatha ukuya kwiinyanga ezintathu. Ukuba iziphumo ezinqwenelekayo azifezekanga ngexesha lonyango, omnye umjikelo wexesha elifanayo unokumiselwa kwakhona. Nangona kunjalo, ikhosi yesibini kufuneka iqale okungenani inyanga emva kokuphela kweyokuqala. Ukuthatha i-Noopept kwimijikelezo kuthintela ukunyamezelana.
Ukuba ufuna ukugcina iphethini efanelekileyo yokulala, zama kangangoko unako ukuphepha ukuthatha iNoopept ngokuhlwa. Kungenxa yokuba iziphumo zamachiza amatsha zinokuphazamisa ukulala kwakho.
Ngaba i-Noopept stack kunye nezinye i-nootropics?
I-Noopept iphakathi kweyona isebenzayo Abaxhasi bokuqonda kwaye ke, unokufumana iziphumo ezinqwenelekayo nokuba usebenzisa zona zodwa. Nangona kunjalo, ukuba ufuna isiphumo esomeleleyo, isitaki seNoopept nootropic esibonisa ezinye izongezo, kubandakanya i-nootropics inokuxhamla ngakumbi. Ezinye ze-nootropics ezidla ngokubandakanywa kwi-nooteptic stack yiPiracetam, Alpha GPC kwaye Aniracetam.
Uphononongo olwenziwe ukuseka ukuhambelana kunye nokusebenza kwe-noopept-Piracetam yabonisa ukudityaniswa kwe-nootropics ezimbini ezikhokelela ekuphuculeni ukusebenza kwengqanawa yegazi yomntu ebantwini. Kananjalo, isitaki sinokuba luncedo olukhulu kubantu abanengxaki yokuphazamiseka kwengqondo ethambileyo.
Ukuthatha i-milligrams eziyi-10 zeNoopept nge-2 gram yePiracetam kuya kuphucula ukusebenza kweerotransmitters zakho, kwaye kubhetele xa usebenzisa elinye lala mayeza mabini ngokuzimela. Ukuba ufuna umphumo wePiracetam ubhengezwe ngakumbi, unokongeza isongezelelo se-choline esifana neAlf GPC. Kwi-Alpha GPC, faka i-300mg yayo kwiphakheji.
Kwimeko apho ufuna ukuba neemeko ezingcono, ukukhululeka koxinzelelo kunye nememori engcono, cinga ukufaka i-10 yeemiligrafu zeNoopept ngegram enye ye-Aniracetam. Le yokugqibela iya kwandisa amandla e-noopept okunciphisa uxinzelelo. Ukuphuculwa kobuchule bokusebenza, ukongeza ukongeza ii-milligram ze-Sulbutiamine kwi-combo kuya kuba licebo elilungileyo. Yongeza ii-milligram ze-Alpha ze-GPC kumxube ukuba ufuna ukuba ube namandla ngakumbi.
Zeziphi iziphumo ebezingalindelekanga zeNoopept?
Nangona i-Noopept ngokubanzi ithathwa njengekhuselekileyo kunye nokunyamezelana okuhle, ineziphumo ezimbalwa ezincinci. Ezinye zeziphumo ezibi zeNoopept zibandakanya:
Ukuphazamiseka kwimemori yexesha elifutshane
Utshintsho lweqondo lobushushu
Iziphumo ezingalindelekanga zeNoopept ikakhulu zenzeka xa ichiza lithathwa kwimithamo ephezulu kunexabiso elicetyiswayo.
Nangona kunjalo, nangona ubuninzi bemizuzu, i-Noopept ayihambi kakuhle nabantu abane-hypertension njengoko inokunyusa uxinzelelo lwegazi labo ukuya kumanqanaba angenampilo. Ngaphandle koko, kuyacetyiswa ukuba abo banengxaki yokudakumba bahlale kude nechiza kuba oko kungazenza zibe nzima ngakumbi iimpawu zabo ezixhalabisayo.
Nangona zingaqhelekanga kakhulu, ezinye iziphumo ebezingalindelekanga zeNoopept zibandakanya iingcinga ezingalindelekanga nezingenantsingiselo¸
Ukuthintela oku phakathi kwezinye iziphumo ezibi zeNoopept, abafazi abakhulelweyo / abagqithisayo, abantu abanengxaki yokunganyamezeli kunye nabo baneengxaki zesibindi okanye ukungasebenzi kakuhle kweentso akufuneki basebenzise iNoopept
Ngaba i-Noopept isemthethweni?
Njengezinye Nootropics, imeko esemthethweni yeNoopept yahlukile kwilizwe elinye kwelinye. Nangona kunjalo, iyeza elingabhaliswanga kumazwe amaninzi, kubandakanya i-US, iBrazil, i-UK, Canada ne-Australia.
Isimo seNoopept FDA okwangoku asiqinisekisi isiphumo sechiza ekuboneleleni ngezibonelelo zichazwe apha ngasentla. Ngenxa yalonto, e-US, i-Noopept ayivumelekanga ukuba ibhengezwe njengeyeza lokusetyenziswa ngabantu. Endaweni yoko, ithengiswa njengesongezelelo esiqhelekileyo kude kube yilapho uNoopept FDA uphando esiya kuphuma nesiqinisekiso esipheleleyo.
Apho uNoopept ethenga kwaye engasetyenziswanga, umntu unokwenza iNoopept ukuba ithenge ngaphandle kweintanethi okanye kwi-Intanethi ngaphandle kokuba icelwe ukuba ingenise kwagqirha. Nangona kunjalo, kubalulekile kuwe ukuba uqiniseke ukuba ivela kuNoopept umthengisi obalaseleyo ukuphepha ukuthenga i-contraband. Ngaphandle koko, ngenxa yokunqongophala kokuyalelwa ngugqirha, umntu makayisebenzise kwidosi ecetyiswayo ukunqanda iziphumo ezingafunekiyo.
Kulungile, ndingayithenga njani i-Noopept?
Ngaba uyazibuza ukuba ungayifumana phi i-Noopept powder ethengisayo? Sukuba nexhala; ukufikelela kwimveliso akufuneki kube yingxaki. Unokwenza i-Noopept powder ithenge ngokungasebenzi ukusuka lukeloku.com, umxhasi onguNoopept obalaseleyo.
Nangona zininzi iindlela onokukhetha ukuthenga ngazo uNoopept kwi-Intanethi, akufuneki uthembele nakubani na nabani na okanye nayiphi na inkampani ethi ibangowona mnikezeli ubalaseleyo weNoopept. Khumbula ukuba i-scammers kunye nabathengisi bembumbulu banesabelo sabo kwihlabathi le-Intanethi.
Nangona kunjalo, qiniseka ukuba awungekhe uhambe kakubi nomthengisi othembekileyo weNoopept onje lukeloku.com. Yeyona ndawo inokuthenjwa kwaye ilungele indawo ekhawulezayo kunye neyenyani kunye ne-pocket-friendly Noopept online.
Ukusuka kolu phononongo lweNoopept nootropics, sibonile ukuba uNoopept uphakathi kwabona baphuhlisi bokwenyani abaziwayo abaziwa ngokuba ngamachiza alumkileyo. Nangona kunjalo, ngaphambi kokuba wenze into yokuthenga i-Noopept, kufuneka wazi ukuba ichiza lilawulwa kwilizwe lakho okanye cha. Apho ingalawulwa khona, ungayithenga njengesiongezelelo esiqhelekileyo esingafuni naluphi na ugqirha ukuba asifumane okanye asisebenzise.
Nangona izibonelelo zeNoopept psychonaut zininzi kwaye zinqweneleka kakhulu, ukusetyenziswa kwesiyobisi okucetyiswayo kufuneka kuthotyelwe. Ngaphandle koko, ukuthatha i-overodose ye-Noopept nootropico kungakhokelela kwiziphumo ebezingalindelekanga ezincinci ze-Noopept ezifana nentloko, ukukhathala, isicaphucaphu kunye nokuxaka.
Nokuba ufuna i-Noopept powder (157115-85-0) uyathengisa okanye uNoopept nootropico uzisebenzisela into oyithengayo, i-ispowder.com yeyona nto iyithengisayo uNoopept ukuthembela kwintengo yokwenyani yeNoopept.
I-Ostrovskaia, i-RU, iGudasheva, i-TA, i-Voronina, i-TA, kunye ne-Seredenin, i-SB (2002). Inoveli yasekuqaleni nootropic kunye nearhente ye-neuroprotective Noopept. I-Ekperimental'naia i klinicheskaia farmakologiia, 65(5), 66-72.
I-Ostrovskaya, i-RU, i-Gruden, i-MA, i-Bobkova, i-NA, i-Sewell, i-RD, i-Gudasheva, i-TA, i-Samokhin, i-AN, ... kunye neMorozova-Roche, LA (2007). Iproteine ​​ye-nootropic kunye ne-neuroprotective proline equkethe i-dipeptide noopept ibuyisela inkumbulo yendawo kwaye ikhulisa i-immunoreactivity kwi-amyloid kwimodeli yesifo se-Alzheimer. Ijenali yengqondo yengqondo, 21(6), 611-619.
UJia, X., Gharibyan, AL, Öhman, A., Liu, Y., Olofsson, A., & Morozova-Roche, LA (2011). I-neuroprotective kunye ne-nootropic yeziyobisi I-Noopept ihlangula i-cycy ye-cytotoxicity ye-synovin. Ijenali yebhayiloji yemolekyuli, 414(5), 699-712.
I-Kondratenko, i-RV, i-Derevyagin, i-VI, kunye ne-Skrebitsky, VG (2010). I-Novel nootropic dipeptide Noopept inyusa ukuhanjiswa kwe-inhibitory synaptic kwiiseli ze-py1 zephiramidi. Iileta ze-Neuroscience, 476(2), 70-73.
I-Ostrovskaya, i-RU, i-Vakhitova, i-YV, i-Kuzmina, i-US, i-Salimgareeva, i-MK, iZainullina, i-LF, i-Gudasheva, i-TA,… kunye ne-Seredenin, i-SB (ka-2014). Isiphumo sokungasebenzi kwe-noopept inoveopeptective kwimodeli yeselula enxulumene ne-AD ibandakanya ukumiselwa kwe-apoptosis kunye ne-tau hyperphosphorylation. Ijenali yesayensi ye-biomedical, 21(1), 74.
3.Noopept kunye neNootropic
4.Usebenza njani uNoopept?
5.Noopept vs Piracetam: Ngaba ziyafana?
6.Yintoni iNoopept esetyenziselwa yona?
7.Ndingayithatha njani iNoopept?
8. Ngaba i-Noopept stack kunye nezinye i-nootropics?
9.Zeziphi iziphumo ebezingalindelekanga zeNoopept?
11.OK, ndingayithenga phi iNoopept?
2019-10-15 isilumkiso Nootropics
ISIQHELO Imvume yokushicilela © WISEPOWDER Inc.